အိန္ဒိယက ရခိုင်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကူညီရန် ကမ်းလှမ်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း အိန္ဒိယက ရခိုင်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကူညီရန် ကမ်းလှမ်း
အိန္ဒိယက ရခိုင်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကူညီရန် ကမ်းလှမ်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရခိုင် ပြည်နယ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံအကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပူးပေါင်းကူညီဆောင် ရွက်လိုတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရကို ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ရက်က နေပြည်တော်မှာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri တို့ တွေ့ဆုံတုန်း အိန္ဒိယဘက်က ပြောဆိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ လိုအပ်သူများကို အကူအညီပေးနေပြီး နိုင်ငံတကာ အကူအညီများကိုလည်း လက်ခံနေတယ်၊အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အရင်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အိန်ဒိယက ရခိုငျရရှေညျဖှံ့ဖွိုးရေး ကူညီရနျ ကမျးလှမျး
အိန်ဒိယနိုငျငံက ရခိုငျ ပွညျနယျ ရရှေညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ နှဈနိုငျငံအကွား နားလညျမှုစာခြှနျလှာလကျမှတျရေးထိုးပွီး ပူးပေါငျးကူညီဆောငျ ရှကျလိုတယျလို့ မွနျမာအစိုးရကို ကမျးလှမျးလိုကျပါတယျ။
စကျတငျဘာ ၁၅ရကျက နပွေညျတျောမှာ လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးနဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Vikram Misri တို့ တှဆေုံ့တုနျး အိန်ဒိယဘကျက ပွောဆိုကမျးလှမျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာဝငျးမွတျအေးက လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှုဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျလို့ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရအနနေဲ့ ခှဲခွားမှုမရှိဘဲ လိုအပျသူမြားကို အကူအညီပေးနပွေီး နိုငျငံတကာ အကူအညီမြားကိုလညျး လကျခံနတေယျ၊အိန်ဒိယနိုငျငံနဲ့ လညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ အရငျကလညျး ရခိုငျပွညျနယျ အခွခေံ အဆောကျအအုံမြား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနဲ့ ခငျြးပွညျနယျနဲ့ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ခဲ့ဖူးပါတယျ။
Previous article ဒီမိုကရေစီ ကဖျက်ယဖျက်သမားများ သတိထားလို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ပြော
Next articleဘင်္ဂလီ ၁၇၆ ရွာ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးလို့ အစိုးရ ပြော